(4-4) ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့အချင်းချင်းခြေစမ်းပွဲမှာသူဟာ(2) ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်လို့ လုရှော့ရှင်းပြ
[Zawgyi] (4-4) ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့အချင်းချင်းခြေစမ်းပွဲမှာသူဟာ(2) ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်လို့ လုရှော့ရှင်းပြ ” ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ သွင်းဂိုးသွင်းကြတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သတ် လို့မီဒီယာတွေရေးသားဖော်ပြထားတာနဲ့နည်းနည်းကွာနေ ပါတယ်။ ပွဲက(4-4) နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကအဲ့ပွဲမှာ (2) ဂိုးတောင်သွင်းခဲ့တာဗျ ! ကျွန်တော့်ဘက် မှာဆို ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းကတစ်ဂိုးနဲ့ဖာနန်ဒက်ကတစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တာဗျ။ အခြားအသင်းမှာတော့ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်က(2)ဂိုးနဲ့အီဂါလို က(2) ဂိုးသွင်းခဲ့တာပါ။ ဘောလုံးမကစားတာ အချိန်တွေကြာမြင့်ပြီးပြန်ကစားရတဲ့ အချိန်ဂိုးသွင်းနိုင်တာက လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့သွင်းဂိုးက ဖာနန်ဒက်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပေးပို့ကနေ ပါ။ ကျွန်တော်လည်းအမြောက်အများဘောလုံးပေးပို့လို့နိုင်ခဲ့ သေးတယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ်ပျော်မိပါ တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အရှေ့မှာ ကစားတာတော့ မာတာပါ။ ကျွန်တော်ဘောလုံးတော်တော်များများကိုထိခွင့်ရပြီး ဂိုးပေါက်ကန် သွင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပဲရခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင်နားထား ပြီးမှ ပြန်ကစားတဲ့ပွဲဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကနေရာလွတ်တွေရှာနိုင်ပြီးကစားခဲ့ပါတယ်။ ” [Unicode] (4-4) ဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့အခငျြးခငျြးခွစေမျးပှဲမှာသူဟာ(2) ဂိုးသှငျးခဲ့တယျလို့ …
အိန္ဒိယ သမ္မတပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား´´တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ
[Zawgyi] အိန္ဒိယ သမ္မတပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား´´တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ ဒီစာကို ဖတ် ပြီးသွားရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ တာဝန် သိစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယသမ္မတပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက လက်ရှိမြန်မာလူမျိုး အတော်များများရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ သဘောတူတယ် သဘောကျ တယ် နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လူတွေ သိအောင်ရှဲပေးစေချင်ပါတယ်။ အခုလို ပြောထားပါတယ်။” မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်ရမလား..?ရတယ်ဆိုမှ ဒီစာကိုဆက်ဖတ်ပါ…အချိန်မရှိရင်တော့ မင်းသဘောပဲ…။ “တို့အိန္ဒိယအစိုးရက လုပ်ဆောင်မှုတွေ မထိရောက်ဘူး မင်းပြောတယ်။ တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကလဲ အိုဟောင်းပြီး …
(၆) လပိုင်းမှာ မိုးများမည့် ဒေသများ နှင့် မိုးခေါင်မည့် ဒေသများ စာရင်း…
[Zawgyi] (၆) လပိုင်းမှာ မိုးများမည့် ဒေသများ နှင့် မိုးခေါင်မည့် ဒေသများ စာရင်း… ၂၀၂၀ ဂျွန်လ ၆လပိုင်း June/2020 အတွက်ရာသီဥတုအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ ကလေး ၊ကလေးဝ ၊မော်လိုက် ၊ခမ်းပတ် ၊တမူး ဖောင်းပြင် ၊မင်းကင်း ၊ပင်လယ်ဘူး ၊ဝန်းသို ၊ကောလင်း ၊ထီးချိုင့် ၊ဟုမ္မလင်း ၊ထမံသီ၊နန်းယွန်း ခန္တီး လဟယ် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ရွာသွန်းမြဲမိုးရေချိန်ထက်ပိုမိုရွာသွန်းဖွယ်ရှိပါတယ်။ မေခ မလိခ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားပိုင်းကုလားတန်မြစ် မေယုမြစ်တွေမှာ…မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းအနောက်ဖက်ပိုင်း (ချင်းတွင်းမြစ်) မြစ်ကြီးနား ၊ဝိုင်းမော် (ဧရာဝတီမြစ်) တွေမှာစိုးရိမ်ရေမှတ်များအထက်သို့ ကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ဘူး ဝန်သို ကောလင်း ဒေသများတွင် …
[Zawgyi] တစ်ချိန်က ဆင်းရဲလှတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ လူတွေအိုလာရင် စွန့်ပစ်တဲ့ ဓလေ့မှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဂျပန်ရိုးရာ ပုံပြင်လေးတစ်ခု ဖတ်ဘူးတယ်။ သိပ်လည်း ကြိုက်ခဲ့တယ်။ အမြဲလည်း မှတ်မိနေတယ်။ အခု အသက်ကြီးလာတော့ ဒီပုံပြင်လည်းဟာ အဓိပ္ပါယ် ပိုရှိလာတယ်။ ပိုပြီး တွေးစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပုံပြင်လေးက ဒီလိုပါ။ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟာ အလွန့်အလွန် ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံလေး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လူတွေဟာ အစာရေစာကို ဝလင်အောင် မစားရဘူး။ စိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ မြေ က နည်းပြီး ရာသီဥတုက ပြင်းထန် တော့ ထွက်သမျှ စပါးဆန်ရေဟာ …
[Zawgyi] အရက်ဆိုင် မှာ စားပွဲထိုးလုပ်ခဲ့ရပေမယ့် ငယ်ဘဝ အိပ်မက်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်တဦး ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အိမ်က အတော်ဆင်းရဲတယ်။ ကျွန်တော် ၄ တန်းအောင်တော့ အိမ်က စားသောက်ဆိုင်ကလေး စ ဖွင့်တယ်။ နယ်ဘက်ဖြစ်လို့ အစားအသောက်ထက် အရက် ဘီယာ ပိုရောင်းရတယ်။ အဲ့တုန်းက ကျူ ရှင်မနေဘူး။ ဆိုင်မှာပဲ စားပွဲထိုးရတယ်။ညနေ ၅ နာရီဆို ဆိုင်ထဲ လူ စ စည်ပြီ။ ရွာက အရက်သမားတွေ စ စုနေလောက်ပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဆိုင်ထဲ တဖွဲဖွဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်ပါပဲ။ ဂရမ်း၊ rc၊ မန်းလေးရမ်၊ ဟိုက်ကလက်၊ မြန်မာ၊ မန်းလေး၊ ဘီယာချမ်း၊ …
YBS 40 ကား ယာဉ်မတော်ဆ တိုက်မှုနဲ့ဆုံးပါးသွားတဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းရဲ့ မိသားစုအတွက်အလှူငွေ ၂၅သိန်းနှင့်ဆန်တစ်အိတ်လှူခဲ့တဲ့ ဂျွန်လွှင်
[Zawgyi] YBS 40 ကား ယာဉ်မတော်ဆ တိုက်မှုနဲ့ဆုံးပါးသွားတဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းရဲ့ မိသားစုအတွက်အလှူငွေ ၂၅သိန်းနှင့်ဆန်တစ်အိတ်လှူခဲ့တဲ့ ဂျွန်လွှင် YBS 40 ကား တိုက်မှုနဲ့ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးဆုံးပါးသွားတဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းရဲ့အမျိုးသမီး မိသားစုအတွက် Stars & Model Int’l မှ ဂျွန်လွင် ဦးစီးပြီး အလှူငွေကောက်ခံပေးခဲ့ရာငွေကျပ် ၂၅ သိန်း နဲ့ ဆန် တစ်အိတ်ကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်း က ပြန်လည်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ #johnlwindonation #အကြင်နာတရားထွန်းကားရေး Credit #AKonThi [Unicode] YBS 40 ကား ယာဉျမတျောဆ တိုကျမှုနဲ့ဆုံးပါးသှားတဲ့ တက်ကစီယာဉျမောငျးရဲ့မိသားစုအတှကျအလှူငှေ ၂၅သိနျးနှငျ့ဆနျတဈအိတျလှူခဲ့တဲ့ ဂြှနျလှငျ YBS 40 ကား တိုကျမှုနဲ့ယာဉျမတျောတဆမှုဖွဈပွီးဆုံးပါးသှားတဲ့ …
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ် ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…! တုံးအတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားတုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မြင်တိုင်း စိတ်ပျက်လွယ်တယ်။ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့ အရည်အချင်းကို ရှာကြံ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့ အချိန်နေရာ မခွဲဘဲ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်တယ်။ လူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ မဲ့စေ တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားကလူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ ရစေတယ်…ဆုံးမ ပြောဆိုစရာရှိရင် နှစ်ကိုယ်ကြားသာ ပြောဆိုတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက …
[Zawgyi] ဖာနန်ဒက်ပြောပြတဲ့အခက်အခဲဆုံးပြိုင်ဘက်နဲ့အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ” ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဖူးသမျှ အခက်အခဲဆုံးပြိုင်ဘက်ကတော့ ပီယာလိုပါ။ ကျွန်တော်အီတလီမှာကစားတုန်းကသူနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားရတာအင်မတန်မှခက် ခဲပါတယ်။ အကယ်၍ ခင်ဗျာဆီကဘောလုံးဟာ သူ့ရဲ့အနား မှာရှိနေရင်ဆုံးရှုံးရဖို့များတယ်။နောက်တော့သူကမြန်တယ် လို့လည်းထင်ရပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန် ကျွန်တော့်ရဲ့အ​ကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလို့ ပြောရရင် ဒါလော့ပါ။ အကြောင်းကတော့သူလည်းပေါ်တူဂီ သားပဲ။​နောက်တော့သူနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာတွေမှာပါလွယ် ကူမှုတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေစကားတွေအများကြီး ပြော ခဲ့ကြတယ်။” [Unicode] ဖာနနျဒကျပွောပွတဲ့အခကျအခဲဆုံးပွိုငျဘကျနဲ့အကောငျးဆုံး သူငယျခငျြး ” ကြှနျတျောရငျဆိုငျဖူးသမြှ အခကျအခဲဆုံးပွိုငျဘကျကတော့ ပီယာလိုပါ။ ကြှနျတျောအီတလီမှာကစားတုနျးကသူနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ သူနဲ့ရငျဆိုငျကစားရတာအငျမတနျမှခကျ ခဲပါတယျ။ အကယျ၍ ခငျဗြာဆီကဘောလုံးဟာ သူ့ရဲ့အနား မှာရှိနရေငျဆုံးရှုံးရဖို့မြားတယျ။နောကျတော့သူကမွနျတယျ လို့လညျးထငျရပါတယျ။ အခုလကျရှိအခြိနျ ကြှနျတေျာ့ရဲ့အကောငျးဆုံးသူငယျခငျြးလို့ ပွောရရငျ ဒါလော့ပါ။ အကွောငျးကတော့သူလညျးပျေါတူဂီ သားပဲ။နောကျတော့သူနဲ့စကားပွောတဲ့နရောတှမှောပါလှယျ ကူမှုတှရှေိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့တှစေကားတှအေမြားကွီး ပွော ခဲ့ကွတယျ။”
စတာလင် တို့လိုကစားသမားမျိုးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာဟာ ဝမ်ဘစ်ဆာကာဘက်ကအလုပ်ကြိုးစား​နေတာကိုသိသာစေ တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့သည့် Danny Simpson
[Zawgyi] စတာလင် တို့လိုကစားသမားမျိုးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာဟာ ဝမ်ဘစ်ဆာကာဘက်ကအလုပ်ကြိုးစား​နေတာကိုသိသာစေ တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့သည့် Danny Simpson လက်စတာကစားသမားဟောင်း လက်ရှိတွင် ဟန်ဒါဖီးလ် အသင်းတွင်ကစားနေသည့်Danny Simpson က ” လူတိုင်း ကသူ့ကိုအာနိုးလ်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေစွမ်းက မတူပါဘူး။ဝမ်ဘစ် ဟာသူကစားမယ့်ပွဲအတွက်ဆိုရင် အလုပ်တွေကြိုးစားတယ် လို့ဆိုးလ်ရှားကပြောခဲ့ဖူးတယ်။ သူက ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်လို အသင်းမျိုးကနေလာတာကိုမေ့နေကြတယ်။ ဒါနဲ့ဝမ်ဘစ်ဆာ ကာဟာသူ့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို နောက်တန်းမှာ ကစားရင်နဲ့ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်Old Trafford ကွင်းမှာကစားတဲ့ပွဲတော်တော်များများမှာ ဝမ်ဘစ်ဆာကာ တစ်ယောက်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေများတာကိုသတိထားမိ ပါတယ်။ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်မှာ ကစားတာထက်ကောင်းတယ် လို့ယူဆမိတယ်။ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ကစားတုန်းက ဝမ်ဘစ်ဆာကာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်သတိရသေးတယ်။ အဲ့ပွဲမှာယူနိုက်တက်အသင်းသားတွေလည်းသူတို့လုပ်နိုင် တာတွေကိုအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်။သူက အလုပ်ကြိုးစားတယ်။ ဒီတော့သူ့ကိုတော်ရုံနဲ့တော့ယှဉ်လို့မရပါဘူး။ ခင်ဗျာတို့လည်း တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ ကမ္ဘာ့ ထိပ်သီးအဆင့်ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ စတာလင်းလုိုကစားသမားမျိုးကို သူထိန်းချုပ်ကစားနိုင်တယ် …
[Zawgyi] နှာခေါင်းအမြဲတမ်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူကျပ်နေလျှင် ဒီမနက်ခင်းတော့ နှာခေါင်းအမြဲတမ်းပိတ်နေပြီး အမြဲလိုလို အသက်ရှူရခက်ခဲလို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးထိုး ၊ ဆေးစား ၊ ဆေးသောက် လုပ်နေရတဲ့ အသိ ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားစပ်မိရင်း ၊ သူမ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီး သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါတယ် ။အဲဒီ ညီမလေးရဲ့ အလုပ်ကလည်း အမြဲတမ်း အအေးပတ်ဖွဲ့ပြီး ရေနဲ့ မဖြစ်မနေ ထိစပ် နေရတဲ့ အလုပ်ကလေးပါ ။ ဆေးနည်းလေးက ကြက်ဟင်းခါးရွက် နှစ်ရွက်ခန့် ကြိတ်ချေပြီး အရည်ရအောင်ယူပါ ။ထိုအရည်ကို နှာခေါင်းထဲသို့ ထည့်ပြီး ရှူပေးပါ ။ စရှူပြီး သိပ်မကြာခင်မှာလည်ချောင်းတစ်လျှောက် နာကျင်သလို ခံစားရပြီး ၊ …
This Year : 251473
Total Users : 546606
Total views : 2426383